गीत – Khabar Times: Nepal's Online Newspaper
~राष्ट्रकवि माधव घिमिरे~ भुइँचालो, भुइँचालो ! देशै काम्न थाल्यो अनायासै देशै थाम्न– जुट्यो हातेमालो कराउँदै रूखदेखि सारा पन्छी उडे उडूँ भने, पंख छैन भुइँमा मान्छे लडे घर ढले, मन्दिर ढले, धूलो उड्न थाल्यो खोज गर्न, खबर गर्न– जुट्यो हातेमालो
~~~लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा~~~ कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो ? कुन सामग्री पुजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो ? मानिसहरूका काँध चढी, कुन देवपुरीमा जाने हो ? हाडहरूका सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डका दिवार । मस्तिष्कको यो सुनको छानोछ, इन्द्रियहरुका द्वार